Qaramada Midoobay: Ilaa Hal malyan oo qof ayaa lagu hareereysan yahay Suuriya - BBC Somali
Qaramada Midoobay: Ilaa Hal malyan oo qof ayaa lagu hareereysan yahay Suuriya
22 Nofembar 2016
Image caption Dad u murugoonaya qof kaga dhintay duqayn ka dhacday Douma oo ku taalla duleedka Dimishiq.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka ku nool magaalooyinka lagu hareereysan yahay ee Suuriya ay ku dhawaad laba jibaarantay lixdii bilood ee la soo dhaafay, oo ay iminka ku dhow dahay hal Malyan oo qof.
Dadkaas badankood ayaa waxaa hareereeyey ciidanka dawladda, waxayna yihiin kuwo la go'doomiyey oo gaajo lagu dilay, bamna lala dhacay, loona diiday daryeel caafimaad.
Madaxa hawlaha gargaarka, Stephen O'brien, ayaa sheegay in loo baahan yahay in golaha amaanka ee Qaramada Midoobay uu tallaabo adag ka qaato sidii loo soo afajari lahaa weerarrada lagu hayo dadka rayidka ah, loona furi lahaa marin uu gargaarka sii maro.
Qaraarradii hore ayaa waxaa is hortaagay Ruushka oo jaal la ah Suuriya. Maraykanka ayaa magac dhabay 13 taliye oo ka tirsan ciidanka Suuriya, kuwaasoo uu sheegay inay ku lug yeesheen dil iyo dhaawac loo gaystay dad rayid ah.